စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး…
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Jun 4, 2012 in Business & Economics, Editor's Choice, Ideas & Plans | 35 comments
ဒီကောင် ကြောင်ဝတုတ်… ကိုယ့်ဟာကို ၀တ္တုဆက်မရေးပဲ…
ရူးကြောင်ကြောင်ထပြီး စိတ်ပေါက်ရာနောက် ကောက်ကောက်လိုက်တယ်လို့ ဆိုချင်ဆို…
ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားချင်တာကတော့ စိတ်နောက်နောက်နဲ့ပြောတဲ့စကား အမှားတစ်ထောင်ဆိုတော့ မှားရင်လဲ မလိမ်မိုး မလိမ်မာလေးမို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါတော့ဗျာ…
ကဲ… စပြောရရင်… ဟိုလူသဂျီး…
အစကိုဆွဲထုတ်စေချင်ပေမယ့်… ဘယ်သူမှထုတ်တာမတွေ့ရတော့ ကျုပ်မှာ အိပ်မပျော်နိုင်…
အစဆွဲထုတ်မယ်လို့ စဉ်းစားပြန်တော့ မပြည့်ဝတဲ့ဗဟုသုတနဲ့ တစ်ထွာတစ်မိုက်ဦးနှောက်က မလိုက်နိုင်…
အဲဒီတော့ သဂျီးဆိုတဲ့လူပြောတဲ့စကား ပြန်စဉ်းစားရအောင်လေ… ဘာတဲ့…
“ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး…” သူကဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းသေချာမသိ… ဒါပေသည့် သဂျီးရယ်လို့ရာထူးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယူထားမှတော့ ကြယ်လေးလုံးတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ထားမှဖြင့် ပေါက်လွှတ်ပဲစားဖြင့် မပြောနိုင်ကောင်းရဲ့ဆို မီရာအတွေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့… သူပြောလိုက်တိုင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဟာကွက် တွေနဲ့ပတ်သက်တိုင်း ဒင်းကဒီစကားပြောလေ့ရှိတယ်…
ဟုတ်ပါပြီ… ဒါဆို နိုင်ငံတော်ရဲ့စနစ်က မှားခဲ့လား… မမှားခဲ့ဘူးလားပြန်ကြည့်ဖို့လိုလာပြန်ရော…
ယနေအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၃)ဆက်ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့
ပထမဆုံး အခြေခံဥပဒေကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာစပြီးကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားမိပြန်ရော…
အဲဒီ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေကိုဖြင့် လွတ်လပ်ရေးမရခင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရတော့ အဲဒီဥပဒေကိုပဲ ၁၉၇၄ အထိ သုံးခဲ့တယ်… ဖယ်ဒရယ်မူကိုအခြေခံတဲ့ဥပဒေ… အဲဒီထဲမှာပါခဲ့တာက အဓိက ပြည်နယ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယန်းနီ (ကယားဟုထင်) နဲ့ ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီး (၁၀)နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပါတယ်…
အဲဒီခွဲထွက်ခွင့်ကိုက အပြစ်ရှာစရာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်မပြိုကွဲရေးအတွက် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ အခြေခံဥပဒေအသစ်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ဦးနေ၀င်းအစိုးရက အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်…
အဲဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းတွေထပ်ခွဲလိုက်တယ်… အခု ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်… တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် (၁၄)ခုဖြစ်သွားတယ်… နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် မရတော့ပဲ အစိုးရကပဲ ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုပုံစံပြောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်… အဲဒီထက်ပိုပြီးနက်နဲတဲ့အကြောင်း တွေတော့ရှိဦးမှာပါ… ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ၁၉၄၇ကအတိုင်း တော်တော်များများ ထားခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုပဲ ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ… ဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲဆိုရင် တချို့ဥပဒေစာအုပ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဥပဒေအဟောင်းတွေအနေနဲ့ပဲရှိနေသေးလို့ပါပဲ…
၂၀၀၈ ခုနှစ်ရောက်တော့ ဖယ်ဒရယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကို ပြန်လည်ပေးပြီး ယခုကျင့်သုံးနေတဲ့ တတိယမြောက်အခြေခံဥပဒေပါပဲ… ဥပဒေတစ်ချို့ကို ပြင်ဆင်ပြီး ခေတ်နဲ့အညီပြုပြင်ခဲ့ပေးမယ့်… ၁၉၄၇ ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အခြေခံသဘောတရားတူပြီး… ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံပါဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်နဲ့လဲ အခြေခံတူတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
ဒါဆိုရင် သဂျီးဆိုတဲ့လူပြောပြောနေတဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဲဒါပဲလား…
ကျွန်တော်တို့ ကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်က မှန်တယ်ပေါ့… ဒါဆိုရင် စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး လက်ကိုင်သုံးနေရတဲ့လူတွေကပဲ မှားနေတာလား… ကောင်းတဲ့စနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မကောင်းအောင် လုပ်နေတာလား… ဒါ့အပြင် စနစ်ကိုမသိလို့ လက်လွတ်စပယ်လုပ်လိုက်မိတာလား…
ဒါဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုရှိပြီးသားပါ… ခေတ်နဲ့မညီတာတော့ရှိမှာပဲလေ… ပြင်စရာရှိတာပြင်ရမယ်… တိုးတက်အောင်ပြုပြင်ရမယ်… ဒါကတော့ ဥပဒေပြုခွင့် ပြင်ခွင့်ရသူတို့ဘက်ကလုပ်ရမှာပါ… ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စနစ်ကောင်းရဲ့ထီးအောက်ကို ၀င်ဖို့ကြိုးစားရမယ်…
ဥပမာ အခုဖြစ်နေတဲ့ စစ်တွေက ရဲစခန်းရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းပါ…
မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အသတ်ခံရလို့ ပြည်သူတွေက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ရဲစခန်းကိုရောက်လာ ဆန္ဒပြကြရာက စတယ်လို့သိရပါတယ်… တစ်လက်စထဲ ဒီပြသနာဘာလို့ကြီးသွားရလဲဆိုတော့ တရားခံက အန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ… တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အမှုဆိုရင် အဲဒီလောက်ပြသနာကြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး… မုဒိမ်းမှုဆိုတာ ဖြစ်နေကြအမှုတစ်ခုပါပဲ အဲဒီထက်မပိုပါဘူး… မြို့ခံ ပြည်သူတွေ သေဆုံးသွားတဲ့မိန်းခလေးအပေါ်မှာ သနားစိတ်၊ ခံပြင်းစိတ်တွေဖြစ်တာကို နားလည်ပေမယ့်… ဆန္ဒပြတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားတိုင်းလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်လာတယ်… ဒီထက်ပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် မုဒိမ်းမှုကိုအခြေခံပြီး လူမျိုးရေးပြသနာဖြစ်ချင်နေတဲ့ မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ပိုများနေပါတယ်…
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ တရားခံကို ဥပဒေကြောင်းအရ အပြစ်ချတာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလို… ဒီတရားခံကို သေဒဏ်ပေးပါလို့ ပြည်သူတွေပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်…
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီလိုအနေအထားမှာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေ ဥပဒေအတိုင်းစီရင်မှုရှိလား… လာဒ်စားမှုရှိလား…ဆိုတာကို သက်သေမရှိဘဲနဲ့ အထင်နဲ့ရမ်းပြီး စွပ်စွဲခွင့်မရှိပါဘူး… အထင်မဟုတ်ဘူး သေချာတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူတို့ကိုအရေးယူဖို့ သက်သေလိုပါတယ်… တရားခံကို မြို့လည်ခေါင်ထုတ်ပြီး မြို့နေလူထုဆန္ဒအရ စီရင်ရအောင် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ ခေတ်စနစ်က သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ် မြို့ပြနိုင်ငံစနစ်မဟုတ်တော့သလို ဒီမိုကရေစီရှိရာ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ… ပြည်သူပြည်သားတွေလဲ ဥပဒေရဲ့ ထီးအောက်မှာ ဥပဒေရဲ့နည်းလမ်းနဲ့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ အကူအညီယူပြီး မသမာမှုကို ရင်ဆိုင်ရမှာပါ… အစိုးရကလဲ ဥပဒေကို ဥပဒေရဲ့ဂုဏ်နဲ့ညီအောင် ထိန်းသိမ်းပါ…
ရဲစခန်းမှာ ဆန္ဒပြလို့ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရတယ်ဆိုပေမယ့်… အကြောင်းအရင်းကိုတော့ဖြင့် ဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်… ရဲစခန်းဆိုတာ ချောကလက်တွေထားတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး… လူဇိုးလူမိုက်တွေရှိမယ်… လက်နက်ခဲယမ်းတွေရှိမယ်… အဲဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ သူတို့မှာ စခန်းကိုတိုက်ခိုက်လာရင် ပစ်ခွင့်ရှိပါတယ်… အဲဒီလက်နက်တွေသာ ဆန္ဒပြသူတွေလက်ထဲရောက်သွားရင် ဆက်ဖြစ်မယ့်အကျိုးဆက်ကိုရော စဉ်းစားဝံ့ကြပါလား…
ဆန္ဒပြသူတွေကရော အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းဟုတ်နိုင်ပါ့မလား… အနဲနဲအများတော့ ခဲနဲ့ထုတာရှိမှာပါပဲ… ရဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်လာရင် ကာကွယ်ရမှာ သူတို့တာဝန်ပါ… ဆန္ဒပြသူတွေက အပစ်မခံရအောင် နေတတ်ဖို့လဲလိုမယ်ထင်ပါတယ်… အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လူအုပ်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခွင့်ရဲမှာ မရှိဘူးဆိုတာ သိထားပြီးသားပါ… တကယ်လို့ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်… တကယ့်အဓိက အကြောင်းအချက်က ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ဥပဒေရဲ့ထီးအောက်မှာရှိမနေနိုင်တာပါ… နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှိပ်မှုအောက်နေခဲ့ရသူတွေ အနေနဲ့ နဲနဲလွတ်လပ်ရော လွတ်လပ်သလို ဥပဒေမဲ့၊ စည်းကမ်းမဲ့ လုပ်တော့တာပါပဲ… အဖဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ လမ်းမပေါ် ဆေးရိုးထွက်လှမ်းသူတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ…
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တရားဥပဒေကို သိနားလည်ဖို့ထက် တရားဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုယ်တိုင်တရားဥပဒေအောက်မှာ လုံခြုံအောင်နေရပါမယ်… အဲဒီတော့ သဂျီးပြောသလို စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့လူတွေကြောင့်လား… စနစ်အောက်မှာ စည်းကမ်းတကျမနေတဲ့ ကျုပ်တို့လို ပြည်သူတွေကြောင့်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပြန်ထွက်လာပြန်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ဥပဒေတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ မရင်းနီးတာဟာ ရုံးကိုကြောက်အောင်၊ စိတ်ပျက်အောင်၊ အယုံအကြည်မရှိအောင် လုပ်ထားခဲ့တဲ့ အရင့်အရင်အစိုးရအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်… အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်သလို ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ ရှိပြီးသား စနစ်ကောင်းတစ်ခုက ပိုမိုတိုးတက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရင်း ကိုယ်တိုင်လဲစနစ်ရဲ့အကာအကွယ်… ဥပဒေရဲ့ထီးအောက်မှာ စည်ကမ်းတကျနေထိုင်ကြပါစို့လို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်…
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်သဂျီးပြောပြောနေကျစကားလေးတစ်ခွန်းကနေ ဆင့်ပွားတွေးတောတာပါ… ဒါပေမယ့် သဂျီးဆိုတဲ့လူကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရရေးတာတော့မဟုတ်ဘူး… ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မဟုတ်သလို လူပိန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် လူပိန်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ပါ… ကျွန်တော့်အမြင်လေးကို ဆွေးနွေးရင်း ကျွန်တော့်အမှားတွေကိုထောက်ပြမယ့် ကျွန်တော့်ထက် နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာပိုမို နားလည်တဲ့လူအများရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များကိုဖတ်ရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင် မကျယ်မှုအမှားတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်…
ကြားလေသွေးတော့လဲဗျာ. ကျနော်တော့ ကြားရ၊မြင်ရသမျှ
မောင်သန်းထွဋ်ဦး / အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ ရေ ။
အန္တရာယ် ကင်းရဲ့လားဗျ ။
ရခိုင်မှာ ရောက်နေတဲ့ ခင်ဗျား တို့ ၊ ကို nigimi 77 တို့ ၊
အတွက် စိတ်ပူမိပါတယ် ။ အန္တရာယ် ကင်းကြပါစေဗျာ ။
ဒီကိစ္စတွေ အေးဆေးသွားမှ ၊
ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်ရာ နှင့် အနီးဆုံး သံတွဲမှာ ရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက်ဆီက ၊
ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
ဒါမှမဟုတ်လဲ Emotional ဆန်လှတဲ့ ခံစားချက် ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
ဒါမှမဟုတ်လဲ Chronological ဆန်ဆန် ဖြစ်စဉ် Escalated ဖြစ်ခဲ့ပုံလေး ၊
ကောလာဟာလ တွေကော ၊ ချဲ့ကားခဲ့ကြတာတွေကော အပါအဝင်ပေါ့လေ ။
အထူးသဖြင့်တော့ ခင်ဗျားဆီက မွတ်ဆလင်တစ်ဦးရဲ့
ဒီဖြစ်စဉ် တစ်လျောက်လုံး ခံစားချက်လေးတွေ ၊
ကြားချင် တွေ့ချင် မိတယ်ဗျာ ။
ယထာဘူတ ကျကျ ရေးနိုင်မယ့် သူ ၊
အစွန်း မရောက်လောက်မယ့်သူ တွေ မို့လို့လည်း ၊ တောင်းဆိုရဲတာပါဗျာ ။
ကိုယ့် MG က တကယ့်ရွာသားတွေ ရှိရဲ့သားနှင့် ၊
တကယ့် ဆောင်းပါးကောင်းတွေ တက်မလာရင် ၊
ဘာသာခြားဖြစ်လို့လဲ ၊ အများစု မကြိုက်မှာစိုးပြီး မရေးရဲစရာ မရှိပါဘူး ။
ကျနော်ကတော့ ကျနော် နှင့် သဘောထားမတူရင်တောင် ၊
ဆိတ်လစေ့လိုမနေပဲ ၊ လိမ်ညာကောက်ကျစ် မနေပဲ ၊
ကိုယ့်ခံယူချက်နှင့်ကိုယ် ၊ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်တဲ့လူတွေကို ၊
အနဲဆုံး လေးစားလောက်တဲ့ ရန်သူတစ်ဦး အနေနှင့်ပေါ့ ။
ကျုပ်ကတော့ နှစ်ခုလောက်ပဲ Comment ပေးချင်ပါတယ် ။
၁ ။ လှုပ်ရမယ့် အချိန်ဆို ငြိမ်ပြီး ၊ ငြိမ်ရမယ့် အချိန်ဆို လှုပ်တဲ့ ၊
ချစ်စဖွယ် အမိ နိုင်ငံတော်ကြီး နှင့် တိုင်းသူပြည်သား အပေါင်းလေ ။
၂ ။ တိုင်းပြည်တွေဟာ သူတို့နှင့် ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရကို ရနေတာပါပဲ ။
တချို့ ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်တွေလည်း သူတို့နှင့် ထပ်တူ ခံစားပေးလို့ရပေမယ် ၊
အခုကိစ္စ ကတော့ Emotional သိပ်ဆန်လွန်းတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အစွန်းရောက် ရာဇဝတ်မှုပဲဗျာ ။
တကယ့်ကို ၊ မြန်မာပြည်သား အများစုကြီးကို ၊
Emotional သိပ်ဆန်တယ် ၊ Logical မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ် ။
သိသိကြီးနှင့် ချစ်နေမိ ၊ မျှော်လင့်နေမိတာကတော့ တပိုင်းပေါ့လေ ။
အာ ……. ကိုကြောင်(စ်)၀စတုတ်ကလည်း သူဂျီးကိုပြောတာ နိုင်ငံရေးတွေပါထည့်ရေးတယ် ……. သူကြီးကို ပြောချင်ရင် သူကြီးအကြောင်းကိုပဲပြောပေ့ါ တစ်ခြားဟာတွေပါတော့ ဖတ်ရတာ မျက်စိရှုပ်တယ် ……. သူများကြယ်ချင်ကြယ်မကြယ်ချင်နေ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ကြီးကြယ်တော့မယ် ……. ဒါပဲ * * * * * *
ဥပဒေကို အသုံးချပီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကရော
ဥပဒေကို အသုံးချပီး ပြည်သူတွေကို ခြောက်လန့်စားနေကြသူတွေကို
တကယ်ပြောရရင် ကိုဇာဂနာတို့ရဲ့ သံချပ်လေးလိုပါပဲ…
လူဟာလူပဲ မူနဲ့ မဆိုင်ဘူးးလို့ပဲ ထင်မြင်ယူဆမိပါကြောင်းးးးး
စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး ..
မျက်ကန်း မျိုးချစ် စိတ်ကြောင့် …
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်သိပ်ချစ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း အချစ်ကြောင့်…
သူများ ကို ကိုယ်ချင်းစာပီး သာတူညီမျှ မချစ်တတ်တာကြောင့် ….
အဲ့သည့်မှာ အဂတိတရား-၄ ပါး ၀င်လာပီး ..ဒန်တန့်တန် တော့တာပဲ…
ပြန်လည် ထိန်းမတ် ဖို့ကျတော့လည်း …ကာလချာတွေ ဆိုရှယ်လ် နွန်းမ်စ်တွေ
ကွန်မွန်းဗဲလျူးဒွေက ပိုးစိုးပက်စက် ကွန်ဇာဗေးတစ် ဖြစ်နေပီး
ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတော့ဘူး …
ကိုဖက်ပြောတာ လက်ခံတယ်။ ဟုတ်တယ် လူမျိုးထိတော့ အသားထဲမှာနာတယ်ဆိုတာ ခံစားလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရဘူး ဆိုတာ ပြောချင်တာ။ မကောင်းတဲ့ သူကို မကောင်းတဲ့ လမ်းသွားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တွေက ပါ မကောင်းဘက်လိုက်တာ တော့ မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်။ အခုတလော ကြားနေရတာက ဒေါသနဲ့ စိတ်နဲ့ ကို မထိန်းနိုင်လို့ အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်နေတာပဲ ကြားနေရတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒေါသဖြစ်နေတုန်းခဏမှာ စဉ်းစားသင့်တယ်။အမှားမပါတော့ဘူးပေါ့။ အခု ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဒေါသကို ရှေ့တန်းတင်လို့ ဖြစ်ရတာတွေ များနေတယ်။
” အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်သလို ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ ရှိပြီးသား စနစ်ကောင်းတစ်ခုက ပိုမိုတိုးတက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားရင်း ကိုယ်တိုင်လဲစနစ်ရဲ့အကာအကွယ်… ဥပဒေရဲ့ထီးအောက်မှာ စည်ကမ်းတကျနေထိုင်ကြပါစို့လို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်…”
ဒီစာ သားလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဥပဒေဆိုတာ လေးစားရမယ်လို့ ပြောချင်တာ။ သူများဆွဲရာ မကမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူများဘာ ရယ်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုစဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်သင့်ပါတယ်။
သယ်ရင်းရှေ့နေ ဟာသပြောတာ ကြားဖူးတယ် ..
စင်္ကာပူမှာ အိမ်ဝယ်ရင် ရှေ့နေအိမ်နဲ့ ဝေးလား လို့ မေးဝယ်တယ်တဲ့ ..
USမှာ အိမ်ဝယ်ရင် ရှေ့ နေအိမ်နဲ့ နီးလား လို့ မေးဝယ်တယ် တဲ့. .
စင်္ကာပူ မှာ အမှုဖြစ်နှုန်းက US မှာ အမှုဖြစ်နှုန်းထက်များတယ်တဲ့ ..
ခုခေတ်မှာ ရှေ့ နေတွေ ဟာ အရေးပါတဲ့ လူတန်းစားတွေ ဖြစ်နေကြပြီ နော် ..
တကယ်တော့ လစ်ဘရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့
ကျွန်တော်ကတော့ လတ်ဆတ်တဲ့အမြင်နဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်….
အမေစုပြောတဲ့စကားမျိုးပြောရရင်တော့ဖြင့် ဥပဒေဆိုတာ ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ထုတ်ထားတာပါ
နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဥပဒေကို နိုင်ငံသားတိုင်းသေချာမသိနိုင်ပါဘူး…
နားလည်တဲ့ ရှေ့နေလို လူတွေအများကြီးလိုပါတယ်… ဒါမှ နိုင်ငံသားတိုင်းဥပဒေကြောင်းအရ လုံခြုံမှုကိုရနိုင်မှာပါ…
နိုင်ငံသားတိုင်းက ဥပဒေကိုလေးစားရင်… ဥပဒေပြုသူတွေကလဲ ဥပဒေကို မလေးစားပဲနေလို့မရပါဘူး…
ကယန်းနီလို့သုံးထာတက် ကယန်း လို့သုံးတာကပိုမှန်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က စံနစ်ဥပဒေအားလုံးဟာ
ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ကထွက်မလာဘဲ သူများဟာတွေကို ကော်ပီကက်လုပ်ထားလို့ပါဘဲ။
ဦးနုတို့လက်ထက်က အင်္ဂလိပ်အမွေခံယူထားတဲ့စံနဲ့ ရေးဆွဲတယ်။
မပြုမပြင် တလုံးတစ်ပါဒ မလွဲဘဲ တိုက်ရိုက်ကူးချတာအများကြီးပါဘဲ။
(2000ခုနှစ်ထိ စည်ပင်သာယာဥပဒေက အင်္ဂလိပ်ချထားခဲ့တာတွေကို တိုက်ရိုက်သုံးနေတုန်း)
ှုဦးနုလက်ထက်မှာ ဆိုးတာက အခုထိဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေးတိုက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပါဘဲ။
မြန်မာပြည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
ကွန်မြူနစ်ကို နိုင်ငံရေးအရ မတိုက်ဘဲ ဘာသာရေးနဲ့ မဲဆွယ်ပြီးစုတ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။
(ပျက်စီးသွားတဲ့ကွန်မြူနစ်ထဲမှာ မြန်မာပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ပညာတတ်တွေ၊အတွေးအခေါ်ကောင်းသူတွေ
နောက်ဗိုလ်နေ၀င်းလက်ထက်မှာ ဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြီး မြန်မာလူထုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့စနစ်တစ်ခုထွင်ခဲ့တယ်။
မတောင်းဘဲနဲ့လှူဒါန်းပေးကမ်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးမွဲအောင်လုပ်တယ်။
ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံရသူက မမွဲဘဲ အလုပ်သမားလူတန်းစားသာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်။
(တရုပ်ပြည်မှာပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်ဆိုတာ တောင်းတာတောင်မှ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမူ့မရှိလို့သိမ်းရတာ)
နောက် ငွေရှိသူကို အလကားနေရင်းမုန်းတီးတဲ့စိတ်ဝင်အောင်သင်ပေးပြီးရန်တိုက်ပေးတယ်။
နောက်တော့ ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်အောက်မှာ တကယ်လုပ်နိုင်သူ ပညာတတ်လူတန်းစားကဘေးရောက်ပြီး
မဆလပါတီအရိပ်အောက်က လူတွေက ရှေ့ရောက်ကုန်ပါတယ်။
နောက် သူများကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်တတ်ဘဲ ဇွတ်သိမ်းယူ။
မဖြစ်တာကို မဖြစ်ဘူးထားတဲ့ကောင်ကို ဖြုတ် ဖယ်ယှား။
အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်က အဖယ်ခံရမှာစိုးတော့ မကောင်းလဲကောင်းပါတယ်လုပ်ပြီး သူ့အထက်ကလူကိုလိမ်။
အဆင့်ဆင့်လိမ်ရင်းက စာရွက်ပေါ်မှာတင်ကောင်းတဲ့ သတင်းစာမှာသာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။
(အဲဒီမှာ လူတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့စံနစ်တစ်ခုကြောင့်လူတွေပျက်စီးကုန်တာ အခုလက်ရှိအနေအထားအထိပါဘဲ)
အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကလဲတံခါးပိတ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင်
အစစ အရာရာ သူများအကျ သူများသုံးပြီးသားကို အကောင်းလုပ်သုံးရတဲ့ဘ၀ကို အလိုလိုရောက်သွားပါတယ်။
(မော်တော်ကားလိုပေါ့ 2012 ခုနှစ်ရောက်တာတောင် သူများနိုင်ငံကပယ်ထားတဲ့ 2008 ကိုအကောင်းလုပ်စီးနေရသလိုပေါ့။
ှုဦးနေ၀င်းအလွန် ခေတ်မှာတော့ လူဝတ်လဲလာတဲ့လူတွေ ကြီးစိုးလာပါတယ်။
ဘာမှမသိ မတတ်တဲ့သူတွေက နေရာဌာနတွေမှာ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေဖြစ်။
၀န်ဆောင်တာလိုလို အကျိုးဆောင်လိုလိုအမည်တပ်ပြီး တစ်ဆယ်တန်တဲ့ကိစ္စကို တစ်ရာပေးမှရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြန်ရော။
အဲဒီအခါမှာ အကျိုးအမြတ်ကို ငွေနဲ့ရင်းပြီးဝယ်နိုင်သူက လုပ်ပေးနိုင်သူတွေ အရာရောက်သူတွေကို
အဲဒိမှာအဲလိုလူစားတွေက အောင်မြင်ပြီး အမြင့်ရောက်သွားရော။
ဒုက္ခရောက်သူက အရမ်းဒုက္ခရောက်ပြီး ကောင်းစားသူက
ပိုဆိုသွားတာက နိုင်ငံတကာက မြန်မာပြည်ကို အမျိုးမျုိးသောပိတ်ဆို့မူ့တွေနဲ့
အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည့်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်က တရုတ်ကြီးပါဘဲ.။
သုံးနိုင်အောင် ဈေးပေါပေါပဲပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းပေးလို့သာ အသက်ရှုချောင်ခဲ့တာကို
စံနစ်တွေကကောင်းတယ်ထင်ရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ စံနစ်နဲ့ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ
လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေက အမှန်တရားမှန်းသိပါရဲ့နဲ့ မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေရေရာရာ မသိသူက သိသူကိုခိုင်းပါတယ်.
သိသူကလဲ မဟုတ်မှန်းသိရဲ့နဲ့ ခိုင်းသမျှကို မျက်စေ့မှိတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
ပြီးတော့မှ မအောင်မြင်ဘူးဆိုလုပ်ငန်းက ရပ်ကုန်ပါတယ်.။
နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ပြီဆိုကတည်းက ရလာတဲ့ငွေကို လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးမချခင်
ဒါတွေရဲ့ ရလာဒ်က တိုင်းပြည်ချွတ်ခြုံကျပြီး လူတွေက စိတ်ဓါတ်ရေးရာပျက်ပြားသွားတာပါဘဲ။
နောက်ကျနော်တို့ လို သာမန်လူနဲ့ဝန်ထမ်းများကြားမှာ မြန်မာပြည်သူားခြင်းအတူတူဖြစ်ပါလျက်နဲ့မတူခြားနားသလိုသွေးကွဲသွားပါတယ်။
ပြည်သူက ပြည်သူ သီးသန့်ဖြစ်ပြီး။
အဲဒီမှာပြည်သူထဲကနေဖြစ်လာတဲ့အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများကြောင့် လူတွေက အစိုးရကိုသိမ်းကျုံးပြီးအပြစ်တင်ပါတော့တယ်။
သို့ပေမယ့် အကျင့်ပျက်ခြစားတာကလဲ ပြည်သူထဲက ဖြစ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါဘဲ။
သို့သော် အစိုးရဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်း တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူ၊ကောင်းအောင်လုပ်ချင်သူ၊
တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိသူ၊ကိုယ်ခြင်းစာနာတတ်သူ တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်ဖျော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာ
အခုလိုအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူလုပ်သမျှ အကုန်ကောင်းတယ်လို့ ရှေးရှေးကလို ရာနုန်းပြည့်မျက်စေ့မှိတ်ထောက်ခံဘို့မလိုတော့ပါဘူး။
ထို့အတူဘဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာတွေကို လည်း မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ဘာလုပ်လုပ်ဇွတ်ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရင်လဲ လုံးဝမှား တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်.
အရင်ကပြီးခဲ့တာတွေကို သင်ပုန်းချေပါလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီးရေနူးမနေဘဲ နောင်ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရမယ့်အစိတ်အပိုင်းရောက်နေပါပြီ။
အုပ်ချုပ်သူဘက်ကချို့ယွင်းနေခဲ့ရင်လဲ ပြင်နိုင်အောင် ပြောပေးမယ့် ပြည်သူ့ခေါင်းဆိုတာကလဲ အဆင့်သင့်ရှိနေပါပြီ။
ပြောလဲပြောရဲတယ် ပြောလဲပြောတယ် နောင်လဲပြောမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပြီးသား။
အဲတော့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေဘက်က ဘာလုပ်ပေးဘို့ လိုပြီလဲ။
ကိုယ်တွေဘက်က နောင်တိုင်းပြည်ကောင်းစားဘို့အတွက် ဘယ်လောက်အထိ ကိုယ့်အထဲက အလျော့အပါးခံကြမလဲ
ဆိုတာတွေက မဖြစ်မနေမေးရမယ့် မေးခွန်းတွေဖြစ်လာပါပြီ.
အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့တတွေက ရှေးက ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာကိုဘဲ တမ်းတရင်းအချိန်တွေကုန်နေကြပါတယ်။
တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကိုယ်နောက်ကလူကအ ကြောင်းအမျိုးမျုိးကြောင့်ကျနော်တို့ကိုကျော်တက်သွားပါပြီ.
ကျနော်တို့က စကားလုံးစစ်မတိုင်ဘဲ လက်တွေ့ကောင်းအောင်လုပ်ဘို့ ကတော့ သေချာပေါက်လိုအပ်နေပါပြ။ိ
ဒါလေးကတော့ ကျနော့် တွေးတဲ့ အတွေးပါးပါးလေးပါ။.
လေးပေါက်က ကော်မန့်ကိုမေးထဲက ပို့ပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို ခါတော်မှီလေးမန့်ခိုင်းတာပါဗျာ…
အူးပေါက်တို့ လို ရှေးမီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့ ပိုကောင်းသပေါ့ဗျာ..
လောလောဆယ် ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေသမို့ဝင်ဖတ်ယုံလောက်ပဲ လုပ်သွားပါတယ်ဗျား..
စနစ် ဆိုတာကစလို့ စဉ်းစားရရင် နိုင်ငံတကာမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကြီးနဲ့တိုးတက်ခဲ့ဘူးတဲ့
အဲဒီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေကိုအတိအကျလုပ်သူက ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင်မှမရှိသလောက်ပါ။
“ရေးထားစနစ်” နဲ့ “တကယ်လုပ်စနစ်” မတူဘူးပေါ့ဗျာ။
ပြင်ဖို့တွက်တာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး မနှေးတာဝန်
အူးကြောင်ဝတုတ် တကယ်ရေးတော့လည်း လုံးဝအမှန်အကန်ပို့စ်ကြီးပဲဗျာ..
ထောက်ခံပါတယ်… စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်ကြောင့်… စိတ်ကြောင့်
မြန်မာတွေ (ကျနော်အပါ) အရမ်းသွေးဆူလွယ်တဲ့ လူမျိုးပါ။
သွေးဆူအောင် မြှောက်ပေးဖို့ သိပ်လွယ်တဲ့အတွက်…
တခါတလေမှာ မှန်တတ်သလို၊ မှားတာတွေလည်း ခဏခဏဖြစ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ တရားဥပဒေရဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ
တိုင်းပြည်တိုးတက်စေချင်ရင် ထစ်ခနဲဆို သွေးဆူပြီးရှေ့နောက် မစဉ်းစားတော့တဲ့
ကျနော်တို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို အရင်ပြင်ရမှာပဲဗျို့…
ကျုပ် က လေ့လာမှုအားနည်းပါတယ် ။ ကိုကြောင်ဝ ကို မေးချင်တာ တစ်ခုက ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ မဖြစ်ခင် ရွေးကောက်ဲ မတိုင်ခင် အခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံ စာအုပ်တွေကို ပြည်သူားတွေ လေ့လာချင်ရင် လေ့လာဘို့ ဆိုပြီး ထုတ်ရောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ရဲ့ အားလုံးသော နီးပါးဟာ အမေရိကန် ရဲ့ လက်ရှိသုံး နေတဲ့ဟာတွေဘဲလို့ ကြားနေရသဗျ ။ ကျုပ် က အမေရိကန် ရဲ့စနစ်ကို မသိတဲ့ အခါကြ အမှန် အမှား မသိရဘူး ။ ဖြေပေးပါဦးဗျ
မြန်မာ့လွှတ်တော်ထဲ.. စစ်ဗိုလ် ၁မတ်သားကြိး.. ၀င်ပါနေတာနဲ့တင်.. လွဲတာပါ..။
ယူအက်စ်က.. (အကုန်)..ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံချည်း.. လွှတ်တော်တက်တာပါ..။
ပြည်နယ်တွေကို.. ဖယ်ဒရယ်က..တာဝန်ယူပုံ.. ခွဲဝေပုံလည်း မတူပါဘူး..
ယူအက်စ် အခြေခံဥပဒေအနှစ်သာရက.. တကြောင်းထဲ..။ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း(July 4, 1776)ထဲ ပါတယ်..။
အဲဒါက.. ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့.. လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း ထဲလမ်း ပထမအပိုဒ်အနေနဲ့ပါတယ်..။
ဘာစနစ်နဲ့နေနေ.ဘယ်ခေတ်နေနေ. မြန်မာပြည်လူထုလည်း.. အဲဒီတကြောင်းထဲ.. အနှစ်သာရအရ.. လိုက်နာကြည့်ပါလား..
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တရားဥပဒေကို သိနားလည်ဖို့ထက် တရားဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုယ်တိုင်တရားဥပဒေအောက်မှာ လုံခြုံအောင်နေရပါမယ်… အဲဒီတော့ သဂျီးပြောသလို စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့လူတွေကြောင့်လား… စနစ်အောက်မှာ စည်းကမ်းတကျမနေတဲ့ ကျုပ်တို့လို ပြည်သူတွေကြောင့်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပြန်ထွက်လာပြန်ပါတယ်
ဖက်တီးကက်ရေ…လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအခြေခံပြီးပြောရရင်တော့ စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့လူတွေရော၊ စနစ်အောက်မှာ စည်းကမ်းတကျမနေတဲ့ ပြည်သူတွေကြောင့်ပါ အရာရာပျက်စီးနေတာပါ။ စနစ်ကိုဖန်တည်းတဲ့လူနည်းစုကလည်း စနစ်ရဲ့အပေါ်ကနေပြီး မိသားစုတသက်စာ စားဝတ်နေရေးထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုလျှံတဲ့စည်းစိမ်ဥစွာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တည်းထားတဲ့ စနစ်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်နေတာ မရေတွက်နိုင်အောင်ပါ။
စနစ်အောက်မှာစည်းကမ်းတကျမနေတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ၀မ်းရေးကအရေးကြီးနေတော့ စနစ်တို့၊ ဥပဒေတို့ ခေါင်းထဲမထားနိုင်ပါဘူး၊ တနေ့တာဝမ်းရေးကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနေရတော့စည်းကမ်းမဲ့သလိုဖြစ်နေတာပါ။
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. စစ်တွေ ကိစ္စ က ဒီပို့စ်ရဲ့ ဥပမာ အနေနဲ့ ပေးတာဖြစ်ပေမဲ့ အမှတ်မမှားရအောင် ပြင်ဆင်ပေးပါလား ။ စစ်တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စက မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်လို့ မခံရပ်နိုင်တာက မဟုတ်ဘဲ အုပ်စုနဲ့ တစ်ယောက်ကိုဖမ်းသွားရာကနေ စတဲ့ ပြဿနာလို့ ရေးကြတဲ့ အတွက် အမှတ် မမှားကြရအောင် ပြင်ဆင်မှု့လေး ထည့်ပေးပါလား ။
ိုအဲ့ဒီ့ပြဿနာ အခံကလည်းတစိတ်တဒေသတော့ပါမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတစ်ခုမှာ အမှားလေး မပါစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါနော်။
အဖြစ်မှန်နဲ့ အားဖြည့်ပေးတဲ့ ကိုထူးဆန်းရေ ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာ…
ကျွန်တော်ကြားထားမိတာက စစ်တွေကိစ္စမှာ ဟိုမိန်းခလေးကိစ္စကြောင့်လဲပါတယ်လို့ကြားထားလို့ ရေးမိတာပါ…
ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်ကိုရေးချင်စိတ်ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ…
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တုန်းအချိန်မှာ ခေါင်းထဲကညှစ်ထုတ်လိုက်ရတာမို့ အမှားတစ်ရာပါနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ…
စစ်တွေကိစ္စ တောင်ကုပ်ပါဆက်နေတယ်ကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
မဖြစ်သင့်တာတွေ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒို့တိုင်းပြည်ကြီး စည်းမရှိကမ်းမရှိဖြစ်နေရတာ ideal person တွေပျောက်ကုန်တာ ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်ပါရဲ့။
လေးစားလောက်စရာ လူမရှိ။အားလုံးက အကျင့်ပျက်ခြစား မိုးခါးကြီးရွာနေတာ မုန်တိုင်းတိုက်သလိုပဲ။
အခု လေးစားစရာအတုယူစရာ အမေစုကို မျက်စိရှေ့မှာတွေ့နေပါပြီ။
ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှတော့ နောက်နွားတစ်သိုက် ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်ကြပါစို့။
(ဒို့ ဘကြီးစိန် ကိုလည်း စာရင်းထဲထည့်ချင်ထည့်နိုင်ပါတယ်)
ပြည်သူတွေဆဲတာ… တောင်းတာကိုလဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရဆိုတော့…
ခက်နေတာက ပြည်သူတွေကတောင်းလိုက်… သူ့ခမျာပေးစရာမရှိ…
ရှေ့လူတွေလုပ်သမျှလဲ စာရင်းချရှင်းမပြရဲနဲ့… နောက်ဆုံး ဈေးထဲကစကားနဲ့ပြောရရင်…
နေ့ပြန်တိုးတွေယူပြီး လူထုကို နှစ်သိမ့်နေတဲ့ သနားစရာသမ္မတတစ်ယောက်ပါပဲ…
လူထုတွေစဉ်းစားမိဖို့က ကျွန်တော်တို့ လမ်းကောင်းဖို့တောင်းတိုင်း… မီးလာဖို့တောင်းတိုင်း…
အစိုးရက ဆုထားတဲ့ငွေထဲကထုတ်ပြီးလုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး… နေ့ပြန်တိုးယူပြီး လမ်းကောင်းအောင်…မီးလာအောင်လုပ်ပေးနေတာ….
နောက်ဆုံး အဲဒီအကြွေးတွေကို ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေပဲဆပ်ရမှာ… အစိုးရဆိုတာအချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ကြမှာချည်းပဲ…
လူများလုပ်လို့ လိုက်ပြီး ဥပဒေမဲ့ လက်လွတ်စပယ် ရမ်းရမ်းကားကားတွေ လုပ်နေမယ့်အစား..
တရားဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသကြစေလိုပါတယ်။
သဘာဝဆိုတာထဲမှာ လူသားတွေနေကြသပေါ့ သဘာဝ ဘာမှမဝတ်တာကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ကြေးမုံဂျီးတို့အမျိုး ကူမြူနစ်တရုတ်ပြည်ဂိုဗဲ အပြစ်တင်ဘာဒယ်…. သူခုတ်လို့ သစ်တောပြုန်း ရာသီဥတုမူမမှန် လူတွေဖောက်ကုန်ဒါဃလား….။ ကြည့်ဓါတ်ရင်မြင်၏….. :cool:
စကားလေးတစ်ခွန်းကနေ ဆင့်ပွားတွေးလိုက်တဲ့ အတွေးကလည်း
လေးလေးစားစား ဖတ်သွားတယ် ဆိုတာလေး
သံချောင်းခေါက်လိုက်တဲ့ သဘော ၀င်မန့်လိုက်တာပါ။
နောက်မှ အေးဆေး ဆွေးနွေးပါမယ် ညီလေးရေ။
Collateral Damage (များ) ဖြစ်နိုင်သလား (မသိ)။
ကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပါ… နီးစပ်ရာလူငယ်တွေကိုလဲ အသိပညာလေးတွေတတ်နိုင်သလောက်ဝေမျှရင်း
ဂေဇက်ရွာသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အပေါ်တာဝန်ကျေကြောင်းလဲ ပြသရမှာပါနော်…
Collateral Damage မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်…
ကိုဝတုတ်ရေ သူကြီးပြောပြောနေတဲ့စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ကျမနားလည်သလောက်ဖွင့်ဆိုရရင်ဖြင့်
ဒီလိုလေး တွေးမိပါတယ်။ ဥာဏ်မှီသလောက်မို့ လွဲချင်လည်း လွဲနိုင်ပါတယ်။
သူကြီးက ကျမတို့ ရဲ့ အနီဝတ် (သူကြီးအခေါ်ဘာသာရေးပွဲစားတွေ)ကို လက်ညှိုးထိုးချင်နေတာပါ။ နောက် ဘယ်က ဘယ်လို ဆင်းသက်လာမှန်းမသိတဲ့ အစွန်းရောက်ချင်တဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်တဲ့ ဓလေ့တွေ ထုံးစံတွေကို
အလွန်တရာရှေ့တန်းတင်ပြီး ခေါင်းမာတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေကို လက်ညှိုးထိုးချင်တာပါ။ ဘာသာရေးမှိုင်း လူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်ပြီး အယုံလွယ် သွေးဆူလွယ်သော ယဉ်ကျေးမှုကစလို့ ခံယူချက် ရေခံမြေခံမကောင်းပဲ အလွယ်တကူ စီးမျောတတ်တာကို သူက မီးမောင်းထိုးပြီး ပြချင်ပြောချင်နေတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် အစတွေ ဆွဲဆွဲထုတ်နေတာ။
သို့သော် သူက ဒဲ့ပြောတာမို့ အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလိုဖြစ်ပြီး မကြာခဏ အဆဲခံရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း သူကြီးကို သာသာနဲ့နာနာ ဟိုးအရင်က ကြုံရင် ကြုံသလို နှက်လေ့ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ရွာသက်ကြာလာတော့မှ သူပြောချင်တာ သူဆိုလိုချင်တာကို ဟိုတစ ဒီတစကောက်ပြီး သိသလိုလို မသိသလိုလို ဖြစ်လာတာပါ။
သူကြီးက ပြောရင် ဒဲ့ပြောပြီး တဖက်ကနေ ဖိဖိပြီး ပြောတတ်ပါတယ်။ တခါတခါမှ မာမီပုတို့ ဦးကြောင်တို့ စသဖြင့် တခြားသော သူများက တဖက်ကနေ ပြန်ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ နှစ်ခုကြားကနေ ကျမတို့ ရခဲ့တာ ရလိုက်တာက သဘောတရားတွေ ဗဟုသုတတွေပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ကျမတို့ကို အတွေးတွေ တွေးမိအောင် မမြင်တတ်မတွေးတတ်တာတွေကို မြင်လာအောင် တွေးမိမြင်မိစေတာပါ။
သူကြီးတင်စားလေ့ ရှိတဲ့ ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာဆိုတာရဲ့ အသက်က ဒါလေးပါလို့ ကျမ မြင်မိပါတယ်။
သူတချက်မေ့နေတာက ကျမတို့နဲ့ သူနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကွာနေတယ်ဆိုတာရယ်။ ကျမတို့လို လူတွေကို သူလိုချင်သလို တွေးတတ်မြင်တတ်ဖို့ရာ သုံးရမဲ့အကောင်းဆုံးနည်းကို သူမရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီစကားကို အက်ကြောင်းထပ်နေတာပါ။
နောက်တခုက အခုလို ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးရေး ပြသာနာ ၊ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှတဲ့ လူသတ်ပွဲ ဒါတွေကို ငြိမ်းအေးချင်ရင်တော့ ကျမတို့တွေ ဒီရေဒီမြေမှာ နေထိုင်တဲ့ လူမျိုးစုအားလုံး ဘာသာအားလုံးက အတူတကွစုပေါင်းလက်တွဲပြီး ကိုယ့်အမျိုးသူ့အမျိုးမခွဲခြားပဲ ကိုယ့်ဘာသာသူ့ဘာသာမခွဲခြားပဲ မကောင်းမှုကျုးလွန်သူမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးရပါမယ်။ ရှုတ်ချပေးရပါမယ်။
ခက်နေတာက ကိုဝတုတ်ရေ ကျမတို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာ လက်တွဲပြီး ဆန့်ကျင်ရမဲ့အစား အခုတော့ အားရပါးရ ၀ိုင်းဆဲပြီး မဆိုင်တာတွေရော ဆွဲစိ ပြသာနာကြီးအောင် လှုံဆော်ပြီး လုပ်နေကြတာပါပဲ။
သို့သော် အနည်းဆုံးတော့ ကျမတို့ရွာလေးက ဒီလိုအမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရှုတ်ချကြောင်း၊ လက်မခံကြောင်း ပြောဖြစ်အောင် ပြောရမှာပါ။
သဂျီးက သူလိုရာပြောပေမယ့်… ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော်လိုရာဆွဲရသည်ပေါ့…
ဘာသာရေးမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဘာမှမသိသေးတဲ့ ဘေဘီမို့ ကျွန်တော်နားလည်သလို
ဒါပေမယ့် ပုခ်ျပြောသလိုပဲ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းသွားလက်တွဲနေထိုင်ရေးနဲ့ စည်းစနစ်ကျတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ရေးကို
ပုခ်ျရဲ့အတွေးအမြင်လေးက ကျွန်တော့်ပိုစ့်အတွက် အသစ်စမ်းစေပါတယ်ဗျာ…
မေ့သွားလို့ပါ။ ကိုဝတုတ်ရဲ့ ဖွင့်ဆိုပုံကိုကျမလည်း သဘောကျပါတယ်။ နောက်ကိုဝတုတ်ဘာသာရေးမှာ ပြောတဲ့တချို့သော အကြောင်းလေးများလည်း ဖတ်ဖြစ်သလို သဘောတိုက်ဆိုင်မှု တချို့လည်း ရှိပါတယ်။
စနစ်ဘဲ ခေါ်ခေါ်၊ မူဝါဒ ခေါ်ခေါ်၊ ပေါ်လစီ ခေါ်ခေါ်၊ အဲဒါတွေနဲ့ ထိန်းမှ အမှုကိစ္စအားလုံး လူတွေပေါ်ကို မှီစရာမလိုမှာ။
အဲဒါတွေကဘဲ လူတွေ ကို ထိန်းသွားမှာ။
ခေတ် နဲ့ မညီတော့ တဲ့ အိုဟောင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်က စနစ် ကို ကောင်းအောင်၊ အများအတွက်ကို အကျိုးပြုအောင် ဘယ်သူတွေက ချမှတ်ပြဌာန်း မှာလဲ။
လက်ရှိမှာ ချစား နေတဲ့၊ အာဏာလက်ရှိ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေ (အဲဒီ လူတွေ) က ကောင်းတဲ့ စနစ် ကို ရအောင် လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ အခုလောလောဆယ် – မြန်မာပြည် ရဲ့ ပြသနာ က စနစ်ကြောင့် မဟုတ်သေးဘူး။
အာဏာရှင် (လူ) တွေကြောင့်။
အဲဒီ အာဏာရူး လူတွေ မရှိတော့ချိန်ကျရင် တော့ စနစ်ကောင်း တစ်ခု ဆောက်ကြည့် …
ပြီးလို့ မကောင်းသေးရင် စနစ်ကြောင့်လို့ ပုံချကြတာပေါ့။ ;-)
ကျောလေးကိုပွတ်၊ နှုတ်ခမ်းမွေး လေးကိုသပ်၊ ငါးကြော်လေးကျွေး၊ နွားနို့လေး တိုက် ပြီး အားပေးတွားဒယ်။
စနစ်ဆိုတာ လူတွေဖန်တီးရေးဆွဲပေမယ်… စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့လူတွေက
အရီးပြောတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားအာဏာရှင်တွေက စနစ်ကောင်းကို လိုရာသုံးပြီး စနစ်ပျက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတွေက ရာနှုန်းအများစုပါ…
စနစ်ကိုရေးဆွဲစဉ်က အများကောင်းကျိုးအတွက်ရေးဆွဲထားပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ လူနည်းစုကောင်းစားရေးဘက်ကို ဦးတည်သွားတဲ့အတွက် စနစ်ကောင်းတစ်ခုဟာလဲ အများအတွက် မကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်…
တကယ်တော့ စနစ်မကောင်းတာမဟုတ်ဘူး အကောင်အထည်ဖော်နေသူတွေမကောင်းတာပါလို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ…
ကျွန်တော့် အတွေးတိမ်တိမ်ကို နက်နက်နဲနဲအားဖြည့်ပေးလို့…
အရီးကျွေးမွေးတဲ့ နွားနို့လေးနဲ့ ငါးကြော်လေးစားရင်း နှုတ်ခမ်းမွှေးအသပ်ခံ ကျောပွတ်ခံပြီး ဇိမ်ကျကျအိပ်နေပါပြီ အရီးရယ်…
စစ်တွေက ဈေးကောက်ပိုက်ဆံတိုးကောက်လို့ ပါတီကိုတိုင်ကြားရာကတဆင့် ရဲစခန်းကအရေးမယူပေးလို့ ဆန္ဒပြတဲ့ကေစ့်က မဆိုင်ဘူးတဲ့ အဆင်သင့်လို့သာဆက်သွားတာ
ကိုဖက်ကတ် ရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုဖတ်မိတော့ ဟိုနှစ်ကဓာတ်ဆီတန်းစီတဲ့ပိုစ့်မှာ မန်းသွားတဲ့ ကောမန့်တစ်ခုကိုပြန်ပီးသတိရသွားတယ် ဘယ်သူမန်းလဲတော့မသိတော့ဘူး
(မူကကောင်းတယ် လူကမကောင်းတာ) ဆိုတဲ့စကားထဲက လူတွေဟာ…
ဟိုရက်က ကျနော်ရောက်နေတဲ့နေရာက ရွာထဲကိုဝင်မရပါဘူး။
အဲဒါနဲ့ကိုယ်သိသလောက်လေးဝင်ပြောချင်တော့ ဖက်တီးကက်ရေ မင်းကော်မင်းထဲက သာထည့်ပါလို့ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုတော့ ရွာတီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင် ရဲစည်နဲ့တွေ့တော့ ခြံစည်းရိုးပေါက်ကို တိုးဝင်တဲ့နည်းလေးရသွားပါတယ်။
သူပြောတာကို အထက်က လူက မဖြစ်နိုင်မှန်းသိနေတယ်။
ဒါပေမယ့်သူ ညာပြောတာကို လက်ခံတယ်။
အဲ သူကလဲ သူ့အပေါ်က လူကို ထပ်လိမ်တယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာစည်းကမ်းတွေက တော့ ထုတ်ထားတာ ပျံနေတာပါဘဲ.
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မလိုက်နာပါဘူး။
ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေက ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလိုက်နာနိုင်ပါ့မလားလို့ ပြန်မသုံးသပ်ဘူး။
အဲတော့ စည်းကမ်းဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်။
လူ ဆိုတာ လူ မှဖြစ်
စံနစ်ဆိုတာလည်း လူ မှဖြစ်
လူ မှဖြစ်တဲ့ စံနစ် လူ ကို လူ ဖြစ်စေဘို့တော့လိုမယ်။
လူဆိုတာ တွေးတတ်၊ကြံတတ်၊ခံစားတတ် ပြီး အဲဒါတွေအပေါ် လုပ်ရပ်ပါလာတတ်တယ်၊
သည်တော့ စံနစ် တစ်ခု ဆိုတာ လူတွေ ရဲ့ တွေးမှု၊ကြံမှု ၊ခံစားတတ်မှု အားလုံးအပေါ် ခြုံငုံပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့
သဘာဝပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိမ်းမတ်၊လမ်းညွှန်ပေးဘို့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လိုက်နာရန်၊ရှောင်
သည်တော့ လူတိုင်း ဟာ ကိုယ်အပါအ၀င် ကျန်လူသားအားလုံးအတွက်ကောင်းမှုဖြစ်စေတဲ့ တွေးမှု၊
ကြံမှု၊ခံစားမှု တွေ ရှိပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်၊စံနစ်တွေ၊ဥပဒေတွေ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရတောင် ပေါ်စရာ
ဒီမိုကရေစီရတာနဲ့ ထစ်ခနဲဆို ဆန္ဒပြချင်ကြတာလေ